Orinasa sy mpanamboatra kettle fandehanana any Portable China Meiling
Fanamorana sy fanadiovana
Kettle Travel Portable
Rindrina roa (# 304 SUS vilany anatiny & plastika ivelany), efijery fikitika miaraka amin'ny tondro LED. Fisafidianana ny mari-pana manomboka amin'ny 40 ℃ ka hatramin'ny 100 ℃. Mitandrina fiasa mafana. Singa fanafanana nafenina, takona nafenina, tadin'ny herinaratra azo esorina, sosona telo amin'ny insulation fanafanana sy anti-scalding. Fanaraha-maso ny mari-pana, fiarovana ny mari-pana avo.
Zintin'aratra 100-240 V (Adapter-miasa)
Hery (Max) 500 W
Fahaiza-mitahiry rano 0.45L
Dimensions (H) 80 * 80 * 246mm
Fonosana refy (H) 87 * 87 * 245mm
Lanja afa-karatsaka 0,8 kg
1. fiasa in-1
mangotraka, ary mitazona hafanana, 40-100℃ mifehy ny elanelam-potoana, maody hafanana 7 ho an'ny safidy ary manome fahafaham-po ny fahasamihafana. Ny kettle dia azo ampiasaina handrahoana dite sy hitazomana ny rano ho mafana. Kely habe fa avo amin'ny fiasa. Ampangotrahina, hafana hatrany ny fikasihana iray.
2. Famolavolana microboil
Andrahoina haingana ao anatin'ny 6 minitra, rehefa tonga amin'ny teboka mangotraka iray manontolo, ny jiro LED dia hanondro ary hakatona ho azy (mety ho nandrahoina kely fa tena nandrahoina tanteraka, aza manahy ny amin'ny mangotraka.
3. Volomaso marobe sy fiarovana fiarovana maro
Ity kettle ity dia mihaona amin'ny voltatra malalaka avy amin'ny 100V-240V, ary afaka mitazona ny rano amin'ny hafanana tsy tapaka. Izy io dia manana fiarovana fiarovana maro miaraka amin'ny NTC, thermostat ary fuse. Izany no antony maha mpanampy tsara indrindra an'i Neny indrindra indrindra rehefa mamoaka ny zanany izy ireo.
4. mora fonosina ao anaty valizy
Ny kettle azo entina dia mora tehirizina sy entina. Manampy ny mpandeha hanomana zava-pisotro, toy ny dite, kafe, rano mafana amin'ny fotoana rehetra, na aiza na aiza.
5. Fitaovana momba ny sakafo
Izy io dia vita amin'ny silipo sakafo BPA maimaim-poana, fantsom-pitaovana ivelany mahatohitra PC ary ny fotony ary 304 Stainless vy ao anatiny.
6. Volavola ergonomika
Ny kettle azo entina misy vatana anti-skid, famolavolana savaivony lehibe, 360 °mandraraka rano mora, sfonony bokotra pring，ny tadin'ny herinaratra misaraka dia sady kanto no miasa. Fanehoana nomerika LCD ho an'ny fampisehoana mari-pana amin'ny fotoana tena izy, na amin'ny alina aza. Manasongadina ny hatsarana ary koa ny mateza ary mora ampiasaina.
Manaraka: Tower Air Multiplier Bladeless Fan
Kettle azo entina handehanana
Fitsangatsanganana ketrika azo entina
Vata fisakafoanana etona elektrika
1.6L Rice Rice Low Sugar Cooker
Vilany fandrahoan-tsakafo marobe
Herinaratra Sakafo atoandro
Juicer azo entina
Momba ny fanomezana sakafo / MAK